Adepts, Masters iyo Mahatmas
Raadi Adepts, Masters iyo tifaftireyaasha Mahatmas
Vol. 9 Maya 4
Vol. 9 Maya 5
Vol. 9 Maya 6
Vol. 10 Maya 1
Vol. 10 Maya 2
Vol. 10 Maya 3
Vol. 10 Maya 4
Vol. 10 Maya 5
Vol. 10 Maya 6
Vol. 11 Maya 1
Vol. 11 Maya 2
Vol. 11 Maya 3
Vol. 11 Maya 4
Vol. 11 Maya 5
Vol. 11 Maya 6
Markay macaamiladu soo martay, weli ma noqon doono; laakiin ma la midoobi doonaa mahat, oo waxay noqon doontaa mahat-ma.
Erayadan THESE waxay isticmaalaan guud ahaan sanado badan. Labada ugu horeeya waxay ka yimaadaan Latka, ugu dambeyntii Sanscrit. Adept waa erey kaas oo lagu isticmaalay isticmaalo caan ah qarniyo badan waxaana loo adeegsaday siyaabo badan. Si kastaba ha ahaatee, waxa loo adeegsaday qaab gaar ah by saxaafadda saxaafadda, kuwaas oo isticmaalaya ereyga, macnaheedu waxa weeye mid ka mid ah aqoonta farshaxanimada alchemical, iyo kuwa aqoon fiican u leh farsamada. Isticmaalka caadiga ah, ereyga waxaa loo adeegsadey qof kasta oo ku fiicnaa fanka ama xirfadiisa. Macnaha ereyga ayaa ah mid si caadi ah u isticmaala waqtiyada hore. Waxaa ka soo jeeda qowlka reer galbeedka, taliye, oo loo isticmaalay magac si uu u muujiyo mid ka mid ah awood u yeelashada dadka kale sababo shaqo ama awood, sida madaxa qoyska, ama macalinka. Waxaa la siiyay meel qaas ah oo ka mid ah ereyada ku takhasusay iyo rosicrucians waqtiyada warbaahinta wakhtigaas oo macnihiisu yahay mid ka mid ah kuwa uu ka noqday maadadiisa mowduuciisa, iyo kan karti u leh hoggaanka iyo waxbarista dadka kale. Ereyga Mahatma waa erayga Sanscrit, macnaha guud waa nafis aad u weyn, laga bilaabo maha, weyn, iyo carada, nafsad ahaanshaha, kumanaan sano ka dib. Hase yeeshe, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu darey luuqadda Ingiriisiga ilaa wakhtiyadii dhowaa, laakiin waxaa laga yaabaa in laga helo lexicons.
Ereyga mahatma hadda waxaa lagu dabaqay dalkiisa hooyo iyo sidoo kale qofkasta oo loo tixgeliyo nafta laftiisa sida lafaha Hindiya iyo oris. Hadday dhacdo, ereyga waxaa badanaa lagu dabaqaa kuwa loo arko in ay gaareen heerka ugu sarreeya ee adeptship. Sidaas darteed shuruudahaasi waxay u adeegsadeen boqolaal iyo kumanaan sanadood. Muuqaal gaar ah ayaa la siiyay 30kii sano ee ugu dambeeyey.
Tan iyo markii la aasaasay Ururka Bulshada Qoyska ee 1875 ee New York by Madam Blavatsky, ereyadan, iyada oo loo adeegsanayo iyada, waxay u maleyneysaa in waxoogaa kala duwan oo ka badan tan ka hor. Madam Blavatsky ayaa sheegtay in ay amar ku bixisay amiiro, xirfadle ama mahatmas si ay u dhisaan bulsho ujeedada ah in la ogaado aduunka aqoonta gaarka ah ee ku saabsan Ilaah, dabiiciga iyo Man, kuwaas oo baraya dunidii ay illoobtay ama aysan ka warqabin. Madam Blavatsky wuxuu sheegay in awoowayaasha, xirfadlayda iyo mahatmas ay ka hadashay ay ahaayeen raggii hantida lahaa xigmadda ugu sarraysa, oo aqoon u leh sharciyada nolosha iyo dhimashada, iyo dabeecadaha dabiiciga ah, oo awooday inay xakameeyaan xoogagga dabeecadda oo soo saaraan dhacdo sida waafaqsan sharciga dabiiciga ah ee ay doonayaan. Waxay sheegtey in caanahaan, mastersmaska ​​iyo mahatmas ay ka heshay aqoonteeda ay ku taalay Bariga, laakiin waxay ku jireen dhammaan qaybaha adduunka, in kastoo aan la garanayn bini-aadanka guud ahaan. Intaa waxaa sii dheer, Madam Blavatsky oo idil oo idil, mastmas iyo mahatmas ay ahaayeen ama ahaayeen ragga, kuwaas oo da'doodu u dhaxayso da 'ahaan iyo dadaal joogto ah ay ku guuleysteen in ay ku guuleystaan, hannaan iyo maamulaan dabeecadooda hoose iyo kuwa awooday oo u dhaqmeen sida waafaqsan aqoonta iyo xigmaddii ay ku guulaysteen. Qoraalka Qodobbada Qodobbada ah, oo uu qoray Madam Blavatsky, waxaanu heleynaa kuwan soo socda:
"Adept. (Lat.) Adeptus, 'Kii guulaystay.' In Occultism mid ah oo gaadhay heerkii Hore, oo wuxuu noqdaa Master in sayniska falsafada Esoteric. "
"Mahad. Lit., 'jaanis weyn'. Aan ka mid ah amarka ugu sareeya. Xaqiiqooyinka kor loo qaado, iyagoo u hoggaansamaya mabaadii'da hoose ee hoose waxay ku nool yihiin 'nin bini'aadan', oo leh aqoon iyo awood ku habboon marxaladda ay gaadheen horumarka ruuxiga ah. "
Qiyaasta "The Theophophist" iyo "Lucifer" ka hor 1892, Madam Blavatsky ayaa si weyn u qeexay awaamiirta, xirfadlayda iyo mahatmas. Laga soo bilaabo markaa suugaan badan ayaa loo soo saaray iyada oo loo marayo Bulshada Theosophical iyo in badan oo adeegsigaan laga sameeyay shuruudahan. Laakiin Blavatsky waa awoodda iyo markhaati ka hor dunida oo dhan sida ay u jirtey jiritaanka ay ka hadashay sida adepts, masters iyo mahatmas. Ereyadaas waxaa isticmaalay kuwa yurubiyeyaashu iyo kuwo kale oo dareen ka duwan marka loo eego macnaha ay Blavatsky bixisay. Taasna waan ka hadli doonaa. Dhammaan dadkaas, waxay la yimaadeen oo ay aqbaleen caqiidooyinka ay bixisay iyada oo markaas ka dib la hadlay oo ka dib ku qoray qoraaga, xirfadlayda iyo mahatmas qiray in ay aqoonta ay ka helaan iyada. Madam Blavatsky waxay waxbarashadeeda iyo qoraalkeedaba waxay muujisay caddaynta ilo aqooneed oo ka timid macallimiintii loo yaqaano qaniska.
Inkasta oo Madam Blavatsky iyo kuwa fahmi lahaa waxbarashadeeda ay ku qoran yihiin adepts, masters iyo mahatmas, ma jirin macluumaad badan oo toos ah oo aan la siinin macnaha gaarka ah ee mid kasta oo ka mid ah qodobada kale, ama ku saabsan jagada iyo marxaladaha kuwaas oo kuwaasi ay ka buuxsamayaan horumar. Iyadoo la adeegsanayo isticmaalka ereyada Madam Blavatsky iyo Bulshada Theosophical, ayaa ereyadan la ansixiyay kuwa kale, kuwaas oo leh qolyo badan oo diiniga ah, waxay isticmaalaan shuruudaha isku midka ah iyo qaab isku-dhafan oo aan kala sooc lahayn. Sidaas darteed waxaa jira baahi sii kordheysa oo loo baahan yahay macluumaadka cidda ku habboon iyo waxa ereyada macnaheedu yahay, maxaa,, meesha, goorta, iyo sida, kuwa ay iyagu matalayaan.
Haddii ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin adepts, xirfadlayaal iyo mahatmas, markaa waa inay qabsadaan meel qeexan iyo marxaladda horumarinta, meeshanna waa in laga helaa nidaam kasta ama qorshe kasta oo run ahaantii ula jaanqaadaya Ilaaha, Diinta iyo Man. Waxaa jira nidaam lagu daboolay dabeecadda, qorshaha kaas oo ku jira nin. Nidaamkan ama qorshahan waxaa loo yaqaana jimicsi. Meelaha aan ku hadlayno, si kastaba ha ahaatee, ma aha jaangooyooyinka samada ee lagu yaqaan ereygan, inkasta oo laba-iyo-tobnaad ay yihiin calaamadaheena. Midkoodna kama hadleyno maskax ku jira macnaha ay u isticmaasho astrologers casri ah. Nidaamka Zodiac ee aynu ku hadlayno waxaa lagu soo koobay tifaftirayaal badan oo ka muuqday "Ereyga."
Waxaa lagu heli doonaa iyada oo la tashanaysa qodobbadaas oodhan waxaa calaamad u noqonaya goobo, taas oo u muuqata inay tahay goob. Wareegga waxaa loo qaybiyaa xariijin siman; Qeybta sare waxaa la yiraahdaa in ay matalaan unugifested iyo qeybta hoose ee caalamka la iftiimiyay. Toddoba calaamadood oo ka imanaya kansarka (♋︎) ilaa xarig (♑︎) ka hooseeya laynka tooska ah ee la xidhiidha caalamka muuqata. Calaamadaha kor ku xusan qadka dhexe ee calaamadaha ayaa ah calaamado caalami ah.
Calaamadaha muuqda ee toddoba calaamad ayaa loo kala qaybiyey afar adduunyo ama xawli, kuwaas oo, ka bilowda kuwa ugu hooseeya, waa muuqaalka jireed, maskaxda ama maskaxda, maskaxda iyo dhinacyada ruuxiga ah ama adduunka. Dunidan waxaa loo tixgeliyaa inay ka soo jeedaan aragti isdaba-joog ah. Dunida ugu horaysa ee la yiraahdo jiritaanka waa ruuxa, kaas oo ku jira lineka ama diyaarad, kansar-madax-xanaan (♋︎-♑︎) iyo qaabka isku-dhafan waa dunida neefta, kansarka (♋︎). The soo socda waa dunida dunida, leo (♌︎); kan xigta waa dunida qaab, miro (♍︎); iyo kuwa ugu hooseeya waa jinsiga jirka jimicsiga, libra (♎︎). Tani waa qorshaha ku-meel-gaadhka. Ku-oolnimada iyo dhamaystirka dunidan waxaa lagu arkay muuqaallada horumarineed. Calaamadaha u dhigma oo dhammaystiraan kuwa la soo sheegay waxay yihiin scorpio (♏︎), sagittary (♐︎), iyo xajin (♑︎). Scorpio (♏︎), rabitaan, waa guuleysiga lagu gaadhay adduunka qaabka, (♍︎-♏︎); fikirka (♐︎), waa xukunka dunida aduunka (♌︎-♐︎); iyo shakhsiyadda, xajka (♑︎), waa dhammeystirka iyo dhammaystirka neefta, adduunka ruuxiga ah (♋︎-♑︎). Dunida maskaxeed, maskaxeed iyo jiilaalku waxay u siman yihiin oo isku dheelitiraan aduunka oo dhan, libra (♎︎).
Dunida kasta waxay leedahay ciddii u egtahay oo ay ka maarmaan tahay inay ku dhex jiraan adduun gaar ah oo ay ka tirsan yihiin iyo waxay ku nool yihiin. Qodobka shuruudaha, dunida ee neefta, kuwa adduunka, kuwa adduunka qaabka ah, iyo kuwa adduunka jir ahaaneed waxay ahaayeen kuwo kasta oo miyirkiisu dhan yahay gaar ahaan adduunkeed, laakiin fasal walba ama nooc kasta oo dunida ka mid ah ma aha ama ma miyir qabo ee ka mid ah kuwa kale ee adduunka kale. Tusaale ahaan, ninkii dhabta ah ee jidh ahaaneed ma fahmi karo foomamka circa oo ku dhex jira isaga oo ku wareegsan, ama ha ahaato hannaanka noloshiisa oo uu ku nool yahay, taas oo ka soo jiidata isaga, ama neefta ruuxiga ah ee ku adkaysata isagoo ahmiyad gaar ah leh iyo gudaha iyo kan hufnaantiisuna ay suurtogal u tahay isaga. Dhammaan dunidan iyo mabaadi'yadaan waxay ku jiraan gudaha iyo agagaarka jidhka, maadaama ay ku dhex yaalliin gudaha iyo agagaarka jir ahaaneed. Ujeedada horumarintu waa in dhammaan adduunyadani iyo mabaadi'yadooda caqli ahaaneed ay u siman yihiin oo ay u dhaqmaan si caqligal ah iyada oo loo marayo jidhka jidh ahaaneed, si qofku jidhkiisa jidhkiisa u barto inuu fahmo dhammaan caalamka muuqata oo awood u leh inuu si macquul ah u dhaqmo ama dhammaan dunida oo dhan iyagoo weli ku jira jirka jirkiisa. Si arrintan loo sameeyo oo si joogta ah loo sameeyo, ninku waa inuu naftiisa u samaystaa jidh kasta oo adduunka ka mid ah; jidh kastaa waa inuu ahaado mid ka mid ah waxyaabaha adduunka ee uu yahay inuu si macquul ah u dhaqmo. Marxaladda haatan ee horumarinta, ninku wuxuu ku dhex jiraa mabaadii'da la magacaabay; taasi waa in la yidhaahdo, waa neefta ruuxiga ah iyada oo loo marayo nolol xumada ku jirta qaab qeexan oo ka mid ah jidhkiisa jidh ahaaneed ee ku dhaqma adduunka jir ahaaneed. Laakiin wuu ogsoon yahay jirkiisa jirka oo kaliya, iyo adduunka jir ahaaneed oo keliya sababtoo ah wuxuu u dhistay jir jidh oo joogto ah ama foom uusan naftiisa ku jirin. Waxa uu ka walaacsan yahay muuqaalka jirka iyo jirkiisa jirka ah hadda maxaa yeelay wuxuu ku shaqeynayaa jirka jirkiisa halkan iyo hadda. Isagu wuu ogsoon yahay jidhkiisa jidhkiisa haddiiba uu sii socdo iyo in kale; iyo sida adduunka iyo muuqaalkiisa jidh ahaaneed ay yihiin duni iyo jidhka isku dheelitirka iyo isu-dheelitirka, sidaas darteed sidaas darteed ma awoodo in uu dhiso jireed jirka ah inuu sii socdo isbedelka waqtiga. Waxa uu sii wadi doonaa dhismaha jidheed midba midka kale ka dib nolosho badan oo uu ku noolyahay muddo gaaban, dhimashadana mid kasta wuxuu u gooyaa xaaladda hurdada ama ku nasto aduunka aduunka ama adduunyadda fikirka iyada oo aan la siman mabaadii'da oo la helay. Wuxuu mar kale ku soo noqdaa jidhka oo wuxuu sii wadi doonaa inuu nolosha sii wato ilaa noloshiisa ilaa uu naftiisa u abuuro jirka ama jirka oo aan ahayn jireed, kaas oo laga yaabo in uu si caqligal ah ugu noolaado ama ka baxo jir ahaan.
Dadku hadda waxay ku nool yihiin jirdhis jidheed waxayna ka fekerayaan aduunka oo kaliya. Bini-aadanka mustaqbalka ayaa weli ku noolaan doona jirka, laakiin raggu waxay ka soo baxaan dunnida jirkooda oo ay ka fekeraan mid kasta oo ka mid ah adduunka kale marka ay dhistaan ​​jidh ama dhar ama dhar ay la socdaan ama ay ku dhaqmaan adduunyadan.
Erayada loo yaqaan "macmacaanka", "mahatma" iyo "mahatma" ayaa matalaya heerarka kala duwan ee saddexda adduun ee kale. Marxaladani waxay calaamad u yihiin calaamadaha ama calaamadaha qorshaha guud ee jilitaanka.
Adkeyn waa mid ka mid ah oo bartay inuu isticmaalo dareenka gudaha ee la midka ah dareenka jireed iyo cidda wax ka qaban karta dareenka gudaha ee adduunka iyo rabitaankiisa. Farqiga ayaa ah in qofku uu ku dhaqmo dareenkiisa maskax ahaaneed oo uu dareemo waxyaabo ay ka mid yihiin dareenka jirka, waxa uu adeegsanayaa dareenka aragga, maqalka, urinta, dhadhaminta iyo taabashada dunida qaababka iyo rabitaanka, iyo inkasta oo qaababka iyo rabitaanka aan loo arki karin ama aan la dareemin jidhka jirka, wuxuu hadda awoodaa inuu abuuro iyo horumarinta dareenka gudaha, si uu u fahmo oo wax uga qabsado rabitaanka ku habboon foomka kaas oo doonaya in uu jirku ficil ahaan sameeyo. Ficil ahaan sida ficillada noocaas ah ee jirka oo qaab la mid ah jirka, laakiin foomka waxaa loo yaqaanaa inuu yahay waxa ay tahay iyada oo la eegayo dabeecadda iyo heerka rabitaankiisa, waxaana loo yaqaanaa dhammaan cidda wax ka qaban karta dareenka cimilada. Taasi waa in la yidhaahdo, sida nin kasta oo caqli leh u sheegi kara jinsiyadda iyo darajada iyo dhaqanka nin kale oo jidh ahaaneed, sidaas darteed wax kasta oo cajab ah ayaa ogaan kara dabeecada iyo darajo kasta oo kale oo uu ku kulmi karo adduunka rabo. Hase yeeshe, qofkasta oo ku nool adduunka jireed wuxuu khiyaanayn karaa nin kale oo adduunka ka mid ah, sida jinsiyaddiisa iyo jagadiisa, qofna kuma jiro dunida qaab-jecel oo khibrad u leh dabeecaddiisa iyo shahaadadiisa. Dhaqdhaqaaqa jireed jirka ayaa jirku ku jiraa foomka kaas oo siinaya qaabka arinka, iyo arinkan jidhka ah ee qaabkani waa mid loogu talagalay in lagu dhaqaaqo rabitaan. Ninka jidhka ah ee foomka waa kala duwan yahay, lakiin waa la rabaa. Adeptka waa mid ka mid ah dhisay jidhka oo ah rabitaan, kaas oo jidhka rabitaanku uu ku dhaqmi karo qaabkiisa cimriga ama isaga laftiisa sida jidhka rabitaankiisa, kaas oo uu siiyay foomka. Ninka caadiga ah ee dunidu waxa uu leeyahay rabitaan badan, laakiin rabitaankani waa indho la'a. Awoodda ayaa waxay ku abuurtay awood indhoole ah oo rabta qaabka, taas oo aan indhoole ahayn, laakiin waxay leedahay dareen u dhigma kuwa jidhka qaabka, kaas oo ka shaqeeya jidhka jirka. Sidaa awgeed, waa mid ka mid ah kuwa ku guuleystay isticmaalka iyo ficilkiisa rabitaankiisa qaab jirka ah oo ka baxsan ama ka madax banaan jirka jirka. Nidaamka ama dunidu u shaqeynayaan sida shaqooyinkaasi waa maskaxda ama maskax ahaaneed ee qaabka, diyaaradda duurjoogta ah ee loo yaqaan 'scorpio' (scorpio), qaab-jecel, laakiin wuxuu ka shaqeeyaa barta taranka (♍︎ ) rabitaan. Xaq u yeelashadu waxay gaadhay tallaabada buuxda ee rabitaanka. Caqli ahaan sida waa sida jirka ah ee rabitaanka ku shaqeynaya qaab ka baxsan jirka. Tilmaamaha dabeecadda waa in uu wax ka qabtaa dhacdooyinka, sida soo saarista foomamka, isbeddelka qaababka, soo-jeedinta foomamka, qasab ku noqoshada ficillada qaababka, kuwaas oo dhammaantood lagu xakameeyo awoodda rabitaanka, sida uu u dhaqmo laga bilaabo rabitaanka foomamka iyo waxyaabaha dunida dareenka.
Macallin waa mid ka mid ah kuwa ku lug leh oo isu dheellitiraya dabeecadda jinsiga jirka, oo ka adkaaday rabitaankiisa iyo arimaha dunida qaabka, iyo kan xukumaya oo hogaamiya arinta nolosha adduunka ee diyaaradda cirifka ︎-a) booskiisa iyo awoodda fekerka, cilladda (♐︎). Awood waa mid ka mid ah, awoodda rabitaanku, waxay qaadatay tallaabo xor ah oo ku socota adduun-jecel, ka gooni ah oo ka baxsan jirka jirka. Macallin waa mid caqli-gal ah ujeeda jirdhiska jidhka, xoogga rabitaanka, ee gacanta ku haya jaangooyooyinka noloshiisa, iyo kan sidaas ku sameeya awoodda fekerka ah ee uu ka haysto jagadiisa maskaxda ee fikirka. Isagu waa mabaadi'da nolosha oo wuxuu yeeshay jidhka fekerka wuxuuna ku noolaan karaa jirkan fikirkan cad oo ka madax bannaan jidhkiisa iyo jirkiisa jirka, inkasta oo uu ku noolaan karo ama u dhaqmi karo midkood ama labadaba. Ninka jidhka ahi wuxuu ka shaqeeyaa shay, dabeecaduna waxay la socotaa rabitaan, macallin ayaa ku fikiraya fikirka. Fal-kasta oo ka socda adduunkiisa. Ninka caanka ah wuxuu dareemayaa dareen uu jiidanaya sheyga aduunka, caqliga ayaa u wareegay diyaaradiisu laakiin wali waxay leedahay dareenka u dhigma kuwa jir ahaaneed; laakiin sayidkuna wuu ka adkaaday oo kor u kacay labadaba labadaba fikradaha nololeed taas oo dareennada iyo rabitaankooda iyo shayadahooda ay yihiin muuqaal-celin. Maadaama sheyga uu ku jiraa jir ahaan iyo rabitaanku waxay ku jiraan dunida qaabka, sidaas darteed fikradaha waa adduunka nolosha. Asal ahaan waxay ku jirtaa adduunka maskaxeed ee maskaxda ah waxa ay rabaan waxay ku jiraan dunida qaabka iyo walxaha adduunka. Sida caadada u arko rabitaankiisa iyo foomamka aan muuqan karin nin jir ahaaneed, sidaas darteed macallin wuxuu arkayaa oo wuxuu la tacaalayaa fikradaha iyo fikradaha aan laga arkin caqliga, laakiin waxaa laga yaabaa in lagu xiro habdhaqanka si la mid ah qaabka uu qofka jir ahaan u dareemo rabitaankiisa iyo foomka aan ahayn mid jireed. Sida rabitaanku maaha mid u muuqda qaab muuqaal ah, laakiin waa mid ku habboon, sidaas darteed fikirka tooska ahi maaha mid u muuqda, laakiin fikirku waa jaanis gooni ah oo uu leeyahay sayid. Adoo ah amar buuxa oo leh talaabo buuxda iyo talaabo ah rabitaan ka baxsan jireed oo aanu jidhka jidhkiisa lahayn, sidaas darteed sayidkiisu wuxuu leeyahay ficil buuxa oo bilaash ah iyo awooda fikirka jirka ee fikirka aan caadi ahayn. Tilmaamaha dabeecadda ah ee sayidkuna waa inuu ka shaqeeyaa nolosha iyo ujeedooyinka nolosha. Wuxuu hogaamiyaa oo koontaroolaa jaangooyooyinka noloshooda sida waafaqsan fikradaha. Isagu wuxuu u dhaqmaa nolol sida macallin noloshiisa ah, jirka fikirka iyo awoodda fikirka.
Mahatma waa mid ka soo horjeeda, koray, ka soo koray, oo kor u kacay adduunyada jinsiga ah ee nin jir ahaaneed, adduun-doonka ah ee aduunka, nolosha adduunka u fikiray ee sayidkii oo si xor ah u dhaqdhaqaaqa adduunka ruuxiga ah sida shakhsiyad buuxda oo mug leh, oo xaq u leh in si buuxda loo sii daayo oo looga fogaado ama lagu xidho ama lagu dhaqmo jidhka fikirka, jidhka raba iyo jidhka jirka. Mahatma waa dhammaystirka iyo dhamaystirka horumarinta. Neefsigu wuxuu ahaa bilowga soo noqnoqodka caalamka ee loo muujiyay waxbarashada iyo maskaxdiisa. Shakhsi ahaan waa dhammaadka horumarka iyo dhammaystirka maanka. Mahatma waa horumar buuxda oo dhameystiran oo shakhsi ahaaneed ama maskaxeed, taas oo calaamad u ah dhammaadka iyo dhammaystirka horumarinta.
Mahatma waa maskax ahaan shakhsi ahaaneed oo bilaash ah lagama maarmaanka u ah xiriirka kale ee adduunka ka hooseeya dunida neefta ruuxi ah. Mahatma waxuu ku shaqeeyaa neefta sida waafaqsan sharciga oo wax kasta oo neefsanaya ay ka muuqdaan caalamka aan la aqoonsan, oo wax kasta oo muuqday ayaa mar labaad lagu neefsanayaa unugifested. Mahatma waxay la tacaalaysaa fikradaha, ficillada weligeed ah, xaqiiqooyinka fikradaha, iyo sida ay caalamadu u muuqdaan oo u baxaan. Sida sheyga iyo jinsiga adduunka, iyo dareemada dunidan rabta, iyo fikradaha adduunka fikirka ah, waxay keenaan tallaabo ay ka mid yihiin kuwa dunidan, sidoo kale waa fikrado qaanuuni ah oo weligood ah oo loo eego taas oo mahatmas ay ku dhaqanto ruuxa dunida neefta.
Adeptka maaha mid xor ka ah reincarnation sababtoo ah ma uusan ka adkaan rabitaankana lagama xoroobin kaamirooyinka iyo taraafiga. Macallimku wuu ka adkaaday rabitaankiisa, lakiin lagama yaabo in laga xoroobo baahida loo qabo dib uqorsho sababtoo ah meeshii uu jilicsanaa jirkiisa iyo rabitaankiisa waxa laga yaabaa inuusan ka soo shaqeyn Karin dhammaan karma ku xirnayd fekerkiisa iyo ficiladii hore, iyo meesha aan macquul ahayn isaga oo ka shaqeynaya jirkiisa jidhkiisa oo dhan oo dhan karma oo uu horay u soo dhisay, horey u ahaan jirey isaga oo dib ugu soo noqnoqonaya jir iyo xaalado badan sida uu muhiim u yahay inuu si buuxda ugala shaqeeyo karma sharciga. Mahatma wuxuu ka duwan yahay midka iyo macallinka in ay tahay midda ugu muhiimsan in ay mar kale dib udhicin maxaa yeelay wuxuu weli sameynayaa karma, iyo sayidkuna waa inuu dib u jimicsado sababtoo ah, inkasta oo uusan ka dhigin karma inuu ka shaqeeyo wixii uu hore u sameeyay, laakiin Mahatma, oo joojisay inay samayso karma iyo in ay ka shaqeynaysay karma oo dhan, ayaa gebi ahaanba laga xoreeyay wixii loo baahnaa in dib loo dhigo. Mahatma macnaha erayga mahatma ayaa caddaynaya. Muujinayaa mooshinka, maskaxda. M Ma aha maskaxda qofka ama maskaxda, halka mahat waa mabda'a guud ee maskaxda. Ma, maskaxda shakhsiga ah, waxay ku dhaqmaysaa mahat, mabda 'caalami ah. Mabda'addan caalamiga ah waxaa ka mid ah dhammaan caalamka iyo muuqaalkiisa. Ma mabda'a maskaxda oo shakhsi ahaan ka duwan yahay, inkasta oo ay ku jirto mahatam caalami ah; laakiin ma aha inay noqdaan shakhsi buuxa, oo aan bilowga hore ahayn. Bilawga miyirka, maskaxda, falalka ka yimaadda adduunka ruuxiga ee neefta ee kansarka saxeexa (♋︎), neefta, iyo weli waxaa jiraya illaa qaddarin iyo horumarinta mabaadii'da kale ee ugu hooseeya ee qayaxan lagu gaaro libra ( ♎︎), jinsiga jinsiga ee jinsiga ah, kaas oo tilmaamaya mabaadii'da kale ee lagama maarmaanka u ah horumarinta iyo dhammaystirka maskaxda. Maskaxda ama maskaxda waxay wax ka qabataa maskaxda ama maskaxda caalamiga ah iyada oo loo marayo dhammaan wejiyada kacdoonimada iyo horumarinta ilaa ay ka soo baxayso oo ay kor u kacdo diyaarad diyaaradeed oo diyaaradeed ah, aduunka aduunka, diyaaradda koontaroolka kacaawinada u dhiganta diyaaradda oo ay ka bilaabantay hoos ujeeda. Waxay bilowday in ay ka soo baxdo kansarka (♋︎); barta ugu hooseysa ee la gaarey waa libra (♎︎); halkaa oo ay ka bilaabantay cirifka iyo kor u kaca (♑︎), taas oo ah dhammaadkii safarkeedii oo waa isku mid ah diyaarad uu ka soo degay. Waxay ahayd, maskaxda, bilawgii bilowgii ku soo noqoshada kansarka (♋︎); waa ma, maskaxda, dhammaadkii kicinta ee xornimada (♑︎). Laakiin mareeyuhu wuu ka dhex maray mahat, oo waa mahat- ma. Taasi waa in la yiraahdo, maskaxdu waxay ka gudubtay dhammaan wejiyada iyo darajooyinka maskaxda caalamiga ah, mahat, iyo in ay la midoobeen oo isla markaasna dhamaystirtay shakhsi ahaan buuxa, sidaas darteed, mahatma.